Riyadii Farmaajo ee doorasho qof iyo cod oo beenowday | KEYDMEDIA ONLINE
Marka la eego heshiiska cusub, waxba kama duwan doorashadii dadbanayd ee ka dhacday dalka 2016, taasoo ku saleysan nidaamka qabiilka ee 4.5, oo wali aan laga gudbin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa gebi ahaanba fashilmay balan-qaadkii uu Farmaajo u sameeyay shacabka Soomaaliyeed markii la doortay kaasoo ahaa inuu dalka ka qabanayo doorasho qof iyo cod ah 2020-2021.
Shir qaatey 4 maalmood oo Villa Soomaaliya ku yeesheen hogaanka Maamul Goboleedyada iyo Farmaajo ayaa laga soo saarey Maanta war-murtiyeedka lagu shaaciyay in heshiis laga gaarey khilaafkii ka taagna hanaanka doorashadda.
Marka la eego 15-ka qodob ee war-murtiyeedka, waxba kama duwana doorashadda lagu heshiiyay midii dhacday 2016, tusaale ahaan erdadii doorashadda ee ahayd 51 ayaa laga dhigay hadda 101, hal goob oo doorashadda ka dhacday 2016 Maamul kasta, hadda waxaa la dhigay 2 goobood, sidoo kale Baarlamaanka Maamul Goboleedyada wuxuu dooran doonaa Xubnaha Aqalka sare, iyadoo Xildhibaanada Somaliland lagu dooran doono Muqdisho.
Doorashad 2021 waxay lamid tahay tii 2016, sidaasna waxaa daaqada uga baxay riyadii iyo balan-qaadkii beenta ahaa ee Farmaajo, oo maray dhibihii madaxdii ka horeysay, oo ku taariikh noqonayo, hadiiba uusan ka xumanyn.
10. In sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay'daha amniga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha Xubnaha ka ah.
0 Comments Topics: ciidanka dowladda doorashadda 2020 farmaajo